विकास प्रशासन र सामान्य प्रशासन छुट्याउनुपर्छ कि पर्दैन ?
इन्जिनियर्स नेपाल | फागुन ६, २०७६,
पछिल्लो समय इन्जिनियरलाई प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने अवसर दिइनुपर्ने आवाज उठरिहेको छ । लोकसेवा आयोगले पनि यस वर्षदेखि इन्जिनियरिङ पदहरुमा परीक्षा लिने कोर्समा प्रशासनिक विषयलाई समावेश गरेको छ । ‘इन्जिनियरहरु पनि हाकिम हुन्छन् । हाकिम भएपछि व्यवस्थापन बुझ्नुप¥यो । त्यही भएर यो व्यवस्था आवश्यक ठानेका हौं’, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले इन्जिनियर्स नेपालसँग भने, ‘प्रावधिक ज्ञान मात्रै भएर त हाकिम भइँदैन नि ! त्यसकारण थोरै नम्बर प्रशासनिकका लागि राखिएको हो ।’
तथापि, निजामतीमा प्राविधिकतर्फका कर्मचारीले नेतृत्व गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा छैन । हाल संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि यो विषय उल्लेख छैन ।
तर, प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरुले भने विकास प्रशासन र सामान्य प्रशासन छुट्याउन र जुन सेवामा विशेषज्ञता हासिल गरेको हो, सोही सेवाको नेतृत्व गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका छन् । यही माग राखेर इन्जिनियरहरुको एउटा टोलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा विकास प्रशासन र सामान्य प्रशासन छुट्याउन र प्राविधिकको हाकिम प्राविधिक नै हुने वातावरण बनाउनका लागि आग्रह गरिएको इन्जिनियर्स एसोसिएसन वागमती प्रदेशका सभापति नन्द बन्जाडेले जानकारी दिए ।
इन्जिनियरहरुको ज्ञापनपत्र आएको र त्यसबारे अध्ययन गरिरहेको प्रतिक्रिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको छ । विकास प्रशासन र सामान्य प्रशासन छुट्याउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा इन्जिनियर्स नेपालले गरेको बहसमा सहभागी केही विज्ञको विचार उनीहरुकै शब्दमा :
इन्जिनियरले नेतृत्व गर्न व्यवस्थापकीय ज्ञान आवश्यक छ : उमेश मैनाली, अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग
विगतमा इन्जिनियरिङ पदका लागि खुलाइएका दरबन्दीमा लोकसेवाले परीक्षा लिँदा प्राविधिक प्रश्नहरु मात्रै रहन्थे । यस वर्षदेखि प्रशासनिक विषयमा पनि जाँच दिनुपर्ने भनेर कोर्समा केही परिवर्तन गरेका छौँ ।
इन्जिनियरहरु पनि हाकिम हुनुपर्छ भनेरमात्र भएन । हाकिम भएपछि उसले निभाउने जिम्मेवारी र भूमिकाका लागि व्यवस्थापकीय पक्ष पनि बुझ्नु उत्तिकै आवश्यक छ । त्यही भएर यो व्यवस्था आवश्यक ठानेका हौँ ।
प्राविधिक ज्ञान मात्रै छ भनेर त हाकिम भइँदैन । त्यसकारण थोरै नम्बर प्रशासनिकका लागि राखिएको हो । यो हाम्रो आफ्नै सोचाइले गरेको हो । यदि हामीले व्यवस्थापनको बारेमा इन्जिनियरहरुको परीक्षा लिएनौं भने उहाँहरुले यस विषयमा केही पढ्नुभएन भने नेतृत्व गर्न गाह्रो छ । प्राविधिक ज्ञान आफ्नो ठाउँमा छ, नेतृत्व भनेको त व्यवस्थापकीय कुरा हो । त्यसैले व्यवस्थापकीय ज्ञान पनि जरुरी हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
‘इन्जिनियरलाई विकास प्रशासनको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ’: भीम उपाध्याय, पूर्वसचिव
इन्जिनियरहरुले क्षमताअनुसारको आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत हुनुपर्छ । निजामती सेवामा आवश्यक व्यवस्था गरेर इन्जिनियरहरुलाई विकास प्रशासनको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । योजना बनाउने प्राविधिकहरुले हो ।
प्राविधिकहरुले बनाएको र प्रशासकले बनाएको योजनामा धेरै फरक हुन्छ । प्रशासकले पनि योजना बनाउँदा प्राविधिकको सहयोग र सल्लाह लिन्छ तर निर्णय लिने बेलामा प्राविधिकका कुरा बिर्सिने समस्या पनि छ ।
यो समस्या समाधान गर्नका लागि समेत प्राविधिकहरुलाई विकास प्रशासनको जिम्मा दिन आवश्यक देखिन्छ । यस्तो अभ्यास कृषि र मेडिकल सेवामा पनि छ । सम्बन्धित विभागका प्रमुख सम्बन्धित सेवाकै हुन्छन् ।
निजामति सेवाको संरचना ‘रिभ्यु’ गरौँ : डा.सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधार विज्ञ
निजामती सेवालाई सामूहिकीकरण गर्नु आवश्यक छैन । इन्जिनियरिङ सेवातिरको फस्र्ट क्लासका इन्जिनियरहरु सेकेण्ड क्लास भएपछि इन्जिनियर रहनुहुन्न । किनभने सेकेण्ड क्लासको इन्जिनियरको सबै काम प्रशासनको जस्तो छ ।
त्यसकारण निजामती सेवाको समग्र संरचना ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्ने देखिन्छ । लोकसेवाको प्रश्न घोकेर, एस्से लेखेर विकास हुन्न । प्राविधिक मन्त्रालयहरुको काम हे¥यौँ. भने मुख्य प्राविधिक काम कन्ट्राक्टमा गरिरहेका छौं ।
मन्त्रालयमा भएका प्राविधिक कर्मचारीहरुले गर्ने गरिरहेका छैनन् । यो गलत अभ्यास हो । त्यसकारण इन्जिनियरको पनि योग्यताको आधारमा निजामतीमा जान पाइने र निजामतीका पनि विशेषज्ञता छ भने इन्जिनियरमा आउन पाइने गरी निजामती सेवालाई पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको संरचना पञ्चायतले बनाएको हो, यो आउटडेटेड भइसक्यो ।
विकास प्रशासन र सामान्य प्रशासन छुट्याइयोस् : नन्द बन्जाडे, सभापति, इन्जिनियर्स एसोसियसन वागमती प्रदेश
लोकसेवाबाट भर्खरै पास गरेको इन्जिनियर काममा जान्छ । कुनै गाउँपालिकामा जान्छ । कलेजमा सैद्धान्तिक कुराहरु पढाइएको हुन्छ । उसले काममा धेरै खालका समस्याहरु झेल्नुपर्ने हुन्छ । कसलाई सोध्ने ? बीए, इतिहास, समाजशास्त्र पढेर आएकाले प्राविधिक कुरा बुझ्दैन । त्यसकारण इन्जिनियरको हाकिम पनि प्राविधिक नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो । अहिले हाकिमले प्राविधिक कुरा नबुझेर अप्राविधिक आदेशहरु दिएका छन् । उदाहरणका निम्ति एकपटक रुपन्देहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ट्रकहरुलाई सिधै चल्न दिने निर्णय गरे ।
तर, बाटोको क्षमता कति हो भन्ने हेरेनन् । सीडीओले बाटोको क्षमता बुझ्ने कुरा भएन नि ! पछि समस्या आएको थियो । यस्तो धेरै हुन्छ । यही मुख्य माग राखेर हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं ।
ज्ञापनपत्रमा विकास प्रशासन र सामान्य प्रशासन छुट्याइयोस् भन्ने माग राखेका छौं । शाखा अधिकृतहरु प्रशासन विज्ञ हो । नागरिकता कस्तालाई दिने, टिप्पणी कसरी लेख्ने भन्नेमा हामीभन्दा बढ्ता जानकार उनीहरु होलान् तर, बाटो कस्तो बनाउने, कुन घुम्तीबाट लैजाने, खानेपानीको पाइप कसरी ल्याउने भन्ने प्रशासनको जिम्मा होइन । त्यसकारण विकास प्रशासन प्राविधिकहरुले नेतृत्व गर्नुपर्छ, सामान्य प्रशासन प्रशासकहरुले नेतृत्व गर्नुपर्छ ।
ई. कैलाश कार्की | कात्तिक १६, २०७७
बहसमा इन्जिनियर्स एशोसिएसनको अनलाइन मतदान
इन्जिनियर्स नेपाल | फागुन २१, २०७७
घरको नक्सा कसरी बनाउने ? निर्माण सम्पन्नता लिने प्रक्रिया सहित